Onye lanarịrị uhie uhie: Agwaetiti Nwụrụ Anwụ – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Onye lanarịrị uhie uhie: Agwaetiti Nwụrụ Anwụ – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Ị chọrọ ịbụ onye kasị baa ọgaranya n'ụwa? Ịchọrọ iteta n'ụra villa na-anya ụgbọ ala mara mma iburu nwa agbọghọ gị?
4 5 6 ijeri na-echere onye nwe ya.
Ị chọrọ ya? Ị ga-egosipụta uru gị ma nwee obi ike iji merie ihe ịma aka na-abịanụ na onye lanarịrị Red Light: Agwaetiti nwụrụ anwụ. Ihe ịma aka a yiri 3D ọdịnala na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ simulator nwata K- egwuregwu.
Gbanyụọ ndị ọzọ ka ị nweta ụlọ akụ piggy ọla edo maka nke gị.
Enwere ọtụtụ ihe ịma aka ị ga-eche ihu tupu itinye aka na nrọ gị:
– Ọkụ na-acha uhie uhie na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
– Ihe ịma aka Dalgona ma ọ bụ cracker kuki
– Ụkwụ agha
– Agha etiti abalị
– Nkume nrịgo enyo ma ọ bụ akwa akwa iko
– Ntụle marble
Egwuregwu mbụ ga-abụ ihe ịma aka egwuregwu ọkụ ndụ ndụ ndụ na-acha uhie uhie ebe a ga-anwale ndidi gị na stealth gị. Ebumnuche gị bụ ịgafe ahịrị ngwụcha na-enweghị nnukwu nwa bebi jide gị. Mgbe ọ na-ekwu Greenlight a na-ahapụ gị ịkwagharị mana mgbe ọ na-ekwu Redlight, ngagharị niile ga-akwụsị ma ọ bụghị ya, a ga-ewepụ gị. Buru n'uche na enwere oke oge, yabụ ị ga-agba ọsọ ọsọ dịka ị nwere ike ma ọ bụrụ na ịchọghị ịnwụ anwụ n'ọhịa.
Iwu abụọ ị ga-eburu n'uche bụ: Kwụsị mgbe ọbara ọbara na-agba ọsọ mgbe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Egwuregwu nke abụọ, Ihe ịma aka Dalgonal chọrọ ka ị mebie swiiti ahụ iji pụta n'ụdị dị iche iche dị ka kpakpando, nche anwụ, okirikiri,…
Egwuregwu nke atọ, Ụkwụ agha, ịkwesịrị iji ma ikike iche echiche na nke anụ ahụ iji merie otu nke ọzọ. Cheta naanị 50% nke gị ga-adị ndụ na egwuregwu a.
Egwuregwu nke anọ, ịkwesịrị ịma ma ọ bụ ọbụna ọnụọgụ marble dị n'aka ndị mmegide gị, onye na-emeri marble nile nke onye iro
Egwuregwu nke ise – ugegbe steepụ okwute, ọ ga-adị mkpa ka ị mee mkpebi dị mma iji họrọ nkume iko kwesịrị ekwesị ka akara aka gị ghara ịkwụsị ịkwa ụta.
Otu esi egwu
– Metụ ka ịkwaga
– Gbaa ọsọ ọsọ mgbe ọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
– Nọrọ jụụ mgbe ọ na-acha uhie uhie
– Egwu mara mma na isiokwu dị egwu
– Akpụkpọ anụ dị iche iche nwere ọtụtụ ụgwọ ọrụ na-echere n'ihu
– Ọzọkwa egwuregwu dị mfe ịchịkwa
Cheta: Ndị dara ihe ịma aka ahụ ga-eche ọnwụ jọgburu onwe ya ihu.
Download ugbu a ma ọ bụrụ na ị ga-abụ onye nwere chi ọma nke ga-abụ nlanarị ikpeazụ.
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Dead, Island, Redlight, Survivor
← Trivia Deluxe – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike oge egwuregwu poppy – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →
One thought on “Onye lanarịrị uhie uhie: Agwaetiti Nwụrụ Anwụ – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike”
zortilonrel Nọvemba 13, 2021